बोल्न र देख्न नसक्ने अनिताले आफुलाई बचाइदिन आग्रह गर्दै कृष्ण कंडेल लाई लेखिन् मार्मिक पत्र ! – " सुलभ खबर "
बोल्न र देख्न नसक्ने अनिताले आफुलाई बचाइदिन आग्रह गर्दै कृष्ण कंडेल लाई लेखिन् मार्मिक पत्र !
एविसी टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने कार्यकम इन्द्रेणीले हजारौं वेसहारा र उपचार गर्न नपाएर छटपटाएकाहरुलाई जिवनदान दिएको छ । सो कार्यक्रममा आएर सहयोगको अपिल गरेकाहरुले आर्थिक सहयोग पाउने गरेका छन् । कार्यक्रमको लोकपृयताका कारण देश विदेशमा रहने लाखौं नेपालीहरुले त्यो कार्यकममा आएर आफ्नो पीडा सुनाउनेहरुका लागि आर्थिक सहयोग पठाउने गरेका छन् । त्यसैले पनि इन्द्रेणीमा हजारौं पीडितहरु सहयोग माग्न पुगेका हुन्छन् ।
तल प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा पनि यस्तै एक निकै पीडादायी अवस्थाको जोडी आइपुगेकको छ । एक महिला जिवनसंग अन्तिम लडाइ लडिरहेकी छन् । उनीहरुको ७ वर्षको छोरा छ । आमाको मन कति महान हुन्छ । आफु जिवन मरणको दोशाधमा छन् । तर उनलाई आफ्नो भन्दा ७ वर्षको छोराको निकै चिन्ता छ । इन्द्रेणी कार्यक्रममा आफ्ना श्रीमानसंग सहयोगको लागि आएकी ति महिलाले आफ्नो ७ वर्षको छोराको भविष्य बचाइदिन भन्दै देश विदेशमा रहेका नेपालीलाई अपिल गरिन् ।
बोल्न नसक्ने उनले कापीको पानामा लेखेर कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कँडेललाई आग्रह गरेकी हुन् । २७ वर्षकी रुकुम मुसिकोट ९ चौखावागंकी अनिता खड्काको घाँटीमा ट्युमर (क्यान्सर) भएका कारण उनी अन्तिम अवस्थामा पुगेकी छन् । उनले नाकवाट समेत श्वास फेर्न सक्दिनन्, आँखा नदेख्ने भइसके । २७ वर्षको भर्खरको उमेरमा जिवनसंग जुधिरहेकी उनले आफ्नो ७ वर्षको छोराको चिन्ताले सताएको छ ।
उनी बोल्न पनि सक्दिनन् । उनलाई श्रीमानले लिएर इन्द्रेणी कार्यक्रममा आएका थिए । तीन वर्ष देखि श्रीमती विरामी भएपछि ५० लाख भन्दा बढी उपचारमा खर्च भइसक्यो । श्रीमान प्रेम खड्काले बसेको बास पनि साहुले लगिसके । अब त ऋण पनि पत्याउन्नन् । त्यसैले उनी इन्द्रेणीमा आउन परेको बताए ।